को हुन् मदन भण्डारी ? – NamoBuddha Khabar
को हुन् मदन भण्डारी ?
बिहिबार, जेठ ०३, २०७५ | ७:५७:३१ |
जननेता भण्डारी पूर्वी पहाड ताप्लेजुंगमा पिता देवी प्रसाद भंडारीका माइलो छोरोको रूपमा शिक्षित परिबारमा जून २७, १९५२ मा जन्मनु भएको हो । ताप्लेजुंगमा सामान्य पढाइ सकेपछि आचार्य सम्म र एमए गर्न भारतको बनारस बिश्वविद्यालय जानुभयो र डबल एमए गर्नु भयो ।
जून बिश्वविद्यालयमा किसुनजी , पुष्प लाल , लगयात धेरै नेपाली नेताहरुले पढ्नु भएको हो ।
सामन्तवाद विरोधी आन्दोलनका अगुवा र गणतन्त्रका प्रवल पक्षधर कमरेड मदन भण्डारीले अघि सारेका विचारहरुलाई आधार मान्दै नेकपाको आन्दोलनले निश्चित रूपमा नयाँ नेपाल बन्ने र नेपाली जनताको आमूल परिबर्तनको सपना पुरा हुने सम्भाबना जिवितै छ ।
पोखरामा पार्टीको कार्यक्रम सिध्याएर चितवनमा अखिल नेपाल महिला संघको कार्यक्रमको जिल्ला अधिवेशन लगायत तराईको पार्टी कामको सिलसिलामा , तत्कालीन परिस्थिति,देशी बिदेशी साँठगाँठका कारण दासढुंगामा उहाँको सुनियोजित षडयन्त्रका साथ हत्या गरियो ।
यो घटना देख्दा देख्दा सामान्य लाग्ने जस्तो देखिए पनि भयावह राजनैतिक चक्रव्यूह थियो । जुन २०५० साल जेष्ठ ३ गते भयो । सारा मुलुक शोकमा डुवेको थियो । जनताहरु स्तव्ध भए । नेपाली धर्ती रोइन् । एक राष्ट्रवादी विलय हुँदा कतिले लाश नभेटुन्जेल खाना खाएनन् त कतिले कपाल समेत खौरे । घटनाका दोषीलाई सजाय दिनु कता हो कता घटनामा संलग्न अमर लामा समेत केहि वर्ष पहिले मारिनुले घटना रहस्यको गहिराईतर्फ मोडिएको छ ।
भोजपुरमा जन्मिएर मोरङमा अध्ययन गर्ने । पार्टीको कार्यकर्ता बिद्या देवी पाण्डे त्यतिवेला अखिल पाँचौंको तर्फबाट महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा स्ववियुको पदाधिकारी र भूमिगत ढंगले मालेको महिला संगठनलाई बढाउने हिसावले बस्दा तत्कालीन मालेको निर्णय बमोजिम उहाँसंग भण्डारीको जनाबादी बिबाह भएको थियो ।
बनारसको विद्यार्थी जीवनमा शायद नेपाली पुराना नेता र विशेष गरि गरि भारतका समाजबादी नेता, कम्युनिस्ट नेताहरु ज्योति बासु ,तत्कालीन भाकपाका नेता हरिकिशुं सुरजीत र नेपाली नेताहरु पुष्प लाल , मनमोहन , मोहन बिक्रम सिंह , नर बहादुर कर्माचार्या , बीपी कोइराला , सहना प्रधानसंगको सम्पर्कले नेपालको आमूल परिबर्तानको लागी सोच्न झक्झकायो । किनकी भारतमा टप टप कम्युनिस्ट नेताहरु थिए त्यति बेला ।
भारतमा अत्यन्त गरिवीका कारण कम्युनिस्टहरु बढ्दै थिए । भण्डारीको बामपंथी राजनीतिको झुकाब,सक्रियता,निखार्पण,क्रन्तिभाब,देशभक्ति गणतांत्रिक र आमुल परिवर्तनको सोच वनारसको अध्ययनको क्रममा बढेको देखिन्छ ।
भण्डारीले जहिले पनि जनताको सर्वोच्चता र आमूल परिवर्तनलाई जोड दिनुभएको थियो । सबै प्रकारका तानाशाही त्रास धम्की र एकदलीय निरंकुशतालाई सदैव विरोध गर्नुभयो ।
मदन भण्डारीको राजनितिक यात्रा
नक्सलबादी आन्दोलन र तत्कालीन झापा सशस्त्र बिद्रोह पुष्प लालले खोल्नु भएको विद्यार्थी मोर्चाको सेंट्रल कमिटी को सदस्य हुनुभयो । १९७२ आर्थात २०२८ सालमा वनारस विश्वविद्यालय वनारस पढ्न जाँदाको समयमानै उहाँ बाम्पन्थी राजनितिक प्रभावमा परिसक्नुभएको थियो । उहाँ पढाईमा अत्यन्त तेजिलो हुनुहुन्थ्यो ,कबिता ,जनाबादी गीत का रचायेता पनि हुनुहुन्थ्यो ।
“ए हली दाई बाँधेर ल्याँउ है सामन्ती ठुलेलाई ” र “जमीन हुन्छ जोत्नेको धरती पुत्र हे बीर किसान हो ” लोक लयमा आधारित यी गीतका लेखक नेता भण्डारी र यी गीत जनाबादी गीत हुन् । उहाँका दर्जनौ लेख ,दर्शन सम्बन्धी बिचार ,क्रान्तीकारी लेख –कबिता,गीत छापिएको थियो भूमिगत अबस्थामा ।
२०२७÷२०२८ सालतीर चरम गरीबी ,पञ्चायतको हुकुमी सासन ,सामान्तहरुको शोषन,किसान ,मजदूर माथीको शोषन चरम सीमामा पुगेको बेला तेरथुमबाट भर्खर झरेका खड्ग प्रसाद ओली ,रामनाथ दहल ,कृष्ण कुइकेल ,बिरेन राजबंसी ,मंडल सतार ,चन्द्र प्रकाश मैनाली,आरके मैनाली ,जीवन घिमिरे ,झलनाथ खनाल लगायतको नेतृत्वामा सशस्त्र आन्दोलानको नेतृत्व सुरु भयो ।
सामन्त चन्द्र प्रसाद ढकाल लगायत केही सामन्तहरुको काम गर्ने किसान लाई प्रयोग गरी खÞतम गर्ने उग्र काम भयो । सफाया ,टाउको गिडने काम भयो । सामन्त,जाली ,फटाहा ,श्रमिक मारा,किसान मारा ,दलाल जनताकोको कमाईमा राज गर्ने सामन्तहरुको सफाया नियमित ढंगले अगाडी बड़्दै गयो । कति लाइ भौतिक कार्वाही भयो ।कतिलाइ सुध्रिने चेतावनी भयो ।
शोषन नगर्ने,उत्पीडन नगर्ने जनताहरुलाई भनेर तमसुक जलाउने,सामन्तहरुको जग्गा कब्जा गरी भूमिहीन किसान मजदूरहरुलाई राख्ने र उनीहरुलाईनै कमाउन दिने भयो । तर जनताको चेतना त्यो स्तर सम्मा उठेको थिएन ।
संगठन बलियो भएको थिएन ,रेड आर्मीहरु सशक्त थिएनन् ,त्यसकारण जनताले हत्याको रूपमा बुझे ति विद्रोहलाई । पञ्चायति शाषन कडा थियो । आर्मी पुरै राजाको थियो । वर्ग सत्रु खÞतम् अभियान पुर्बबाट सुरु त भयो तर देश भरी फिजाउन सकेनन् । बिशेष त पश्चिममा जनताको चेतनाको कमीको कारणले र दमनको कारणले आन्दोलन सफल हुन सकेन ।
नेपाल का मण्डेला भनिने मोहन चन्द्र अधिकारी , खड्ग ओली , चन्द्र प्रकाश मैनाली, आरके मैनाली, रामनाथ दाहाल लगायत धेरै जना पञ्चायति राजको फन्दामा परे । ९ जनालाई झापा र इलामको बिचमा पर्ने सुखानीको जंगलमा आत्मसमर्पण गर्न भनेको र पार्टीको गोप्य खुलाउन केरकार गरे,बल प्रयोग गरिए राज्यले । गोप्य कुरा नखुलाएको र छोडेमा खतरनाक हुन सक्ने भनी गोली ठोकेर तत्कालीन मालेका ९ जनालाई एक्कै जंगलमा राज्यले हत्या गर्यो,रामनाथ दाहाल ,कृष्ण कुइकेल ,बिरेन राजबंशी लागायातलाई ।
खड्ग ओली,सीपि मैनाली,आरके,मोहन चन्द्र,घनेन्द्र बस्नेत,मन कुमार गौतम,मण्डल सतार, नरेश खरेल,दुर्गा आधिकारी,संजया थापा लागायातलाई पञ्चायतले समात्यो । जेल ब्रेकको मौकाबाट सीपि मैनाली,प्रदीप नेपाल,बीर बहादुर लामा बाहिर अउन सफल भए । तर ओली,मोहन चन्द्र लगायतलाई आजीवन काराबास दियो ।
पञ्चायतको दमन तिब्र थियो । रत्न कुमार बान्तवाको इलामको देउमाई खोलाको किनारमा गोलिहानी हत्या गर्यो । उहाँ अत्यन्त राम्रो संगठक हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन मालेको झापा बिद्रोह सफल हुन सकेन । देश भरी क्रान्ती उठ्न सकेन । सफायाले जनतामा खासै राम्रो प्रभाव पर्न सकेन ।
१९७६ आर्थात २०३३ तीर कोअर्डिनेशन कमिटी (माले)ले बिस्तारै संगठन बिस्तार गर्दै थियो । त्यहि बेला पुष्पलालको पार्टी परित्याग गरी मालेको लाइन ठीक छ भनी १९७८ मा आफ्नो संगठन मुक्ति मोर्चा र माले (कोके)को एकीकरण जस्तो भयो र मदन भण्डारी तत्कालीन मालेको केन्द्रिय सदस्य हुनुभयो ।
सन १९८० अर्थात २०३४ सालमा गठन भएको नेपाल कम्मुनिस्ट पार्टी (माले)को उहाँ संस्थापक सदस्य । प्राय सबै नेता जेलमा परे । त्यसपछि पार्टी पूर्ण रुपमा भूमिगत थियो । भुमिगत जीवनबाट बाहिर निस्केपछि बनेको तत्कालिन नेकपा एमालेको उहाँ महासचिव बन्नुभयो ।
संसारमा कम्युनिष्ट आन्दोलन ओरालो लाग्दै थियो । त्यो अवस्थामा जनताको वहुदलिय जनवाद सिदान्द्ध स्थापित गरी नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई उचाई दिन सफल हुनुभयो भण्डारी, जसले विश्वलाई चकित बनायो ।
“जनताको सरकारले शासन गरिरहेको बेला अनावश्यक प्रदर्शन भइरहलान् भन्ने मलाई लाग्दैन । हो ,कहिलेकाहीं समाज विरोधी तत्वले समाजमा अस्थिरता पैदा गर्ने कोसिस गर्छन् । त्यस्ता तत्वहरुले अस्थिरता मच्चाउने कोसिस गर्दैमा राज्यशक्तिनै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन । हामी जनतालाई परिचालित गरेर तिनलाई परास्त गर्नेछौं । हाम्रो विरुद्ध उत्रनेहरुका बारेमा जनतालाई जानकारी दिनेछौं र जनतालाईनै आफ्नो ठाउँमा उभिन लगाउँनेछौं । तर हामी राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने छैनौं ।”
बन्दुकको नालबाट प्राप्त गरेको सत्तालाई बन्दुककै नालबाट रक्षा गर्ने दर्शनका कारण कम्युनिष्टहरुमा विरोधीसंग विरोधको अधिकार रहदैन भन्ने आम बुझाई थियो । त्यो सन्दर्भमा अमेरिकाबाट चचर्चित साप्ताहिक न्युजविकको २७ मे,१९९१ को अंकमा यि भनाई सार्वजनिक गर्दै उसले नेपालमा कार्ल माक्र्स जीवित भएको सन्देश विश्वलाई दिएको थियो ।
कार्ल माक्र्स त थिएनन् तर डेढ शताब्दी पुरानो कम्युनष्ट विचारलाई नेपालको मौलिक परिस्थितीमा ढाल्न सक्नु भण्डारीको ठुलो दुरदर्शीता थियो ।
नेपालका वामपंथी शक्ति,प्रजातान्त्रिक शक्ति र राष्ट्रवादी शक्तिहरुले जननेता भण्डारीबाट सिक्नु पर्ने विषय धेरै छ्न् । उहाँ सिद्धानतमा अडिग हुनुहुन्थ्यो , कार्यनीति तय गर्दा जहिले पनि जनता र देशको स्वार्थ हेर्नुहुन्थ्यो र आर्थिक रूपमा उहाँ कुनै कुरामा बिबादमा आउनु भएन ।
त्यत्रो पार्टिको महासचिव जस्तो शक्तिशाली पद ग्रहण गर्दा पनि सामान्य डेरामा बस्नु हुन्थ्यो । काठमाडौंमा उहाँको कुनै घर थिएन । सबैको मन जित्न सक्ने नेता भएकोले उहाँलाई जननेता भनिएको हो ।
बर्ग विश्लेषण,वर्ग वीचको अन्तर्बिरोध र त्यसको निकास,जाती, भाषा, अर्थ, संस्कृति, रितिरिवाज, भेषभुषा सम्बन्धी उहाँको राम्रो अध्ययन थियो । सामन्त, शोषक तथा त्यसलाइ सहयोग गर्ने दलालप्रति अत्यन्तै कडा ढंगले प्रस्तुतु हुनुहुन्थ्यो ।
सादा पोसाक, प्राय कालो भादगाउँले टोपी, सामान्य चस्मा, जाडोमा सस्तो तर सफा जाकेट, प्राय जिल्ला जाँदा पैदलनै हिड्ने तथा जनतासँग अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध राख्न सक्ने खुवी उहाँमा थियो ।
भूमिगतबाट निस्केपछि सायद २०४८ सालमा मोरङ इतहरामा परिवार संग पहिलोपटक दशैं मनाएका थिए सामान्य ढंगले । उहाँमा स्पस्ट पार्ने र जनतालाई उनीहरुको मुद्दाको विषयमा छर्लङ्ग हुने गरि गाउँले भाषामानै भनेर संगठनप्रति आकर्षण गर्ने क्षमता थियो ।
अहिलेको परिस्थितमा राष्ट्रिय एकताको लागि सम्पूर्ण बामपंथी पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी, रास्त्रवादी, देशभक्त, जातिय अधिकारवादीहरु,भाषिक अधिकारवादी,सांस्कृतिक आधिकारवादीहरुले जननेता मदन भण्डारीबाट सिक्ने वेला आएको छ । एउटै विन्दुमा उभिदै गरेको दुई कम्युनिष्ट शक्ति एमाले माओवादीको लागि नेता भण्डारी झनै आदर्शव्यक्ति हुनेमा दुई मत नहोला । योनै उहाँप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनसक्छ ।